Chocolate Swiss Meringue Buttercream - Sugar Geek ပြပွဲ - Frosting နှင့်အေးခဲခြင်း
ချောကလက်သက်သောင့်သက်သာစားသုံးခြင်း buttercream သည်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ပြီးသင့်ပါးစပ်ထဲအရည်ပျော်သွားသည်
ချောကလက်ဆွစ်ဇာလန် meringue buttercream ( SMBC ) buttercream တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်ပြီးလုပ်ရတာလွယ်ကူပါတယ်။ အဲဒါကိုမလျှို့ဝှက်ချက်ရှိတယ်။ မင်းရဲ့သကြားကိုကြက်ဥအဖြူတွေနဲ့လွင့်ပစ်လိုက်တဲ့ရေအိုးတစ်လုံးပေါ်မှာပျော်ပါ (Bain Marie) ပြီးတော့ခိုင်မာသော meringue သို့ရိုက်။ သင့်ရဲ့ပျော့ပျောင်းသောထောပတ်, အရည်ပျော်ချောကလက်, ဆားနှင့်, vanilla အတွက်နှင်တံထိုသို့ပါပဲ! သင်သည်သင်၏သကြားဓာတ်ပျော်ဝင်ခြင်းနှင့်ရှုပ်ထွေးခြင်းကိုမလိုချင်ပါကသင်သည် SMBC ကိုလှောင်ပြောင်စေနိုင်သည် ( လွယ်ကူသော buttercream နှင်းခဲ အကြောင်းကိုတစ်ဝက်အချိန်အတွက် pasteurized ကြက်ဥလူဖြူနှင့်အတူ။ Pasteurized egg whiteites ပြီးသားအပူကိုကုသပြီးကတည်းကအပူကိုမလိုအပ်ပါ။ ရုံကအားလုံးကိုနှင်တံသင်ပြီးပြီ! ဤသည်လွယ်ကူသော buttercream ဂန္ချောကလက် swiss meringue buttercream ကဲ့သို့အတော်လေးတည်ငြိမ်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်သင်တစ် ဦး အချိန် crunch ၌နေလျှင်နေဆဲအလွန်ကောင်းသောနှင့်ကြီးသော။
သင့်ရဲ့ tools တွေကိုပြင်ဆင်ပါ
meringue ပြုလုပ်ရန်အစဉ်အမြဲသတ္တုသို့မဟုတ်ဖန်ခွက်များကိုသုံးပါ။ ပလပ်စတစ်သည်အဆီကိုကိုင်ထားလေ့ရှိပြီး meringue ကိုကျဆင်းစေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ရေပွက်ပွက်ဆူနေသောအိုးတစ်လုံးပေါ်တွင်ပလတ်စတစ်အိုးတစ်လုံးထားခြင်းသည်အလွန်လုံခြုံသည်။
ကြက်ဥများသည်အမဲလိုက်ခြင်းကိုယိုယွင်းစေသည့်ပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလွန်သေးငယ်သောအနှစ်တစ်စက် (အဆီဖြစ်သော) ပင်လျှင်ကောင်းကျိုးကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။
ယင်းကိုရှောင်ရှားရန်သင်၏ဥများကိုကွဲအက်သည့်အခါသီးခြားပန်းကန်လုံးထဲသို့သူတို့ကိုတစ်လုံးချင်းစီခွဲပြီးသေချာအောင်ပြုလုပ်ပါ။ ထိုဥဖြူကိုပင်မပန်းကန်ထဲသို့လွှဲပြောင်းပါ။ သငျသညျကြက်ဥအနှစ်ကိုချိုးဖျက်လျှင်ထိုလမ်းကတပြင်လုံးကိုသုတ်ကိုမပျက်စီးပါဘူး။
ချောကလက်ဆွစ် meringue buttercream ပြုလုပ်ရန်အတွက် Pasteurized egg whiteites ကိုရှောင်ပါ။ ကြက်ဥအဖြူများသည် meringue ထဲသို့ဝင်ရန်မသင့်တော်ပါ။ သင်စီမံနိုင်လျှင်ပင် meringue သည်အလွန်ပျော့ပျောင်းလိမ့်မည်။
ငါအရည်ပျော်ချောကလက်ကိုသုံးနေတယ်။ ဒါပေမယ့်မင်းကြိုက်ရင်မင်းလည်းကိုကိုးအမှုန့်ကိုသုံးနိုင်တယ်။ သင့်ကုန်ချောထုတ်ကုန်များတွင်ကိုကိုးအမှုန့်များမဖောင်းပွစေရန်သင်၏ကိုကိုးအမှုန့်ကိုဆန်ခါချပါ။
ချောကလက်ဆိတ်ငြိမ် meringue buttercream လုပ်နည်း
အလယ်အလတ်အရွယ်ရှိပြီနောက်ဟင်းတစ်ခွက်ကိုရေ ၂ လက်မခန့်ဖြည့်ကာမျှတည်ထားပါ။ သင်၏အိုးထဲ၌သင်၏သတ္တုသို့မဟုတ်ဖန်ရောစပ်ထားသောပန်းကန်လုံးကိုထားပါ။ ပန်းကန်၏အောက်ခြေသည်ရေကိုမထိရ ရေနွေးငွေ့မှလွတ်မြောက်ရန်ထွက်ကြည့်ပါ ၄ င်းသည်ပန်းကန်ကိုပူစေနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်သတိထားရန်နှင့်လိုအပ်ပါကမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းကိုသုံးနိုင်သည်။
သင်၏ကြက်ဥအဖြူနှင့်သကြားတို့ကိုပန်းကန်လုံးထဲသို့ထည့်ပြီး whisk ။ ရံဖန်ရံခါကြက်ဥလူဖြူများ၏အပြင်ဘက်အစွန်းကိုအခွံခွာ။ ချက်ပြုတ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်အရောအနှောကိုတခါတရံမှုတ်ပါ။
သကြားဓာတ်ဖျက်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ပန်းကန်ကိုရေအိုးထဲမှဖယ်ထုတ်ပြီးတောင့်တင်းခိုင်မာသောမြင်းရိတ်ထဲသို့ခုန်ချနိုင်သည်။ အဆိုပါ meringue အလွန်ခိုင်မာသောကြောင်းသေချာပါစေ။ ဤအပိုင်းကိုအလွန်အကျွံလုပ်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ ရောစပ်ခြင်းသည်သင်၏ရောနှောမှုပမာဏမည်မျှခိုင်ခံ့မှုပေါ် မူတည်၍ ၅ မိနစ်မှ ၁၀ မိနစ်ခန့်ကြာနိုင်သည်
အဆိုပါ meringue အကြံပေးချက်များဖြောင့်မတ်တပ်ရပ်ခြင်းနှင့်အလွန်သိပ်သည်းခံစားရသင့်ပါတယ်။
သငျသညျ meringue ချအအေးကိုသင်ရောစပ်နေစဉ်ပန်းကန်ဘေးတွင်ရေခဲအိတ်တစ်လုံးချထားပါ။
မင်းရဲ့ meringue အအေးခံပြီးတာနဲ့နူးညံ့ပျော့ပျောင်းတဲ့ထောပတ်၊ အရည်ပျော်တဲ့ချောကလက်၊ သင်၏ buttercream သည်ထောပတ်အရသာမကုန်မချင်းသုတ်သင်ပါ။ ၎င်းသည်အလွန်ပေါ့ပါး။ ခရင်မ်ဖြစ်သင့်ပြီးသင့်ပါးစပ်၌ပျော်ဝင်သင့်သည်။
မင်းရဲ့ buttercream ပွတ်ပြီးတဲ့နောက်လေပူဖောင်းတွေပိုများလာအောင်ငါ paddle attachment ကိုပြောင်းပြီးအနိမ့်ကို ၁၀ မိနစ်ကြာရောနှောချင်တယ်။
ချောကလက်ဆိတ်ငြိမ် meringue buttercream နှင့်အတူပြProbleနာများ
အဆိုပါ meringue တက်ရိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ - ကြက်ဥအဖြူများသည်အသက်ကြီးလွန်းနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်သင်အရောအနှော၌အချို့သောအမဲဆီများလာသည်။ သင့်ရဲ့တန်ဆာပလာအားလုံးကိုသန့်ရှင်းပြီးလတ်ဆတ်သောကြက်ဥအဖြူများကိုသုံးပါ။
အကြှနျုပျ၏ buttercream curdled သို့မဟုတ်ကြည့်ခွဲခြားထားတယ် - အဆီ (ထောပတ်) သည်ရေ (ကြက်ဥအဖြူ) နှင့်ရောနှောရန်ကြိုးစားသောအခါ၎င်းသည်အပူချိန်အတူတူပင်ဖြစ်ရမည်။ အကယ်၍ သင်၏ buttercream သည်ကောက်ပဲသီးနှံဖြစ်လျှင်သင်၏ထောပတ်သည်အလွန်အေးလွန်းသည်။ ပန်းကန်၏ဘေးထွက်ကိုအတူတကွမရောက်မှီတိုင်အောင်ရောနှောနေစဉ်သို့မဟုတ်ရောနှောနေသည့် 1/4 ခွက်ဖလားကိုဖယ်ထုတ်ပြီးမိုက်ကရိုဝေ့ဖ်တွင်အရည်ပျော်ကာအတူတကွပြန်လည်သွန်းလောင်းရန်အတွက်၎င်းပန်းကန်လုံး၏ဘေးဘက်ကိုမီးမွှေးထားသောမီးရှူးဖြင့်မီးထည့်ပါ။
ကျွန်တော့် buttercream ကအရမ်းနူးညံ့တယ် - အကယ်၍ သင်၏ buttercream သည်နူးညံ့လွန်း။ လုံလောက်သည်ဟုထင်လျှင်၎င်းသည်နွေးလွန်းလိမ့်မည်။ ပန်းကန်လုံးတစ်ခုလုံးကိုမိနစ် ၂၀ ထားပြီးလျှင်ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ပြီးထပ်ရိုက်ပါ။
အဆိုပါ buttercream gritty အရသာ - သင်သည်သင်၏သကြားဓာတ်များအားလုံးလုံးမွှေနှောက်စေသောအရာများအားလုံးကိုဖျက်သိမ်း။ မရပါ။ သင်စတင်ထက်အခြားစပါးကိုပြုပြင်ရန်သင်လုပ်နိုင်ဘာမှမရှိပါ။
အကြှနျုပျ၏ buttercream စင်ကြယ်သောထောပတ်ကဲ့သို့အရသာ - လူများသည် buttercream ကိုနှင်တံအောက်သို့ကျရောက်လေ့ရှိသည်။ သငျသညျထောပတ်မြည်းစမ်းလျှင်, ကြာပွတ်ဆက်။ လေထဲထည့်သွင်းခြင်းသည် buttercream အရသာကိုထူးခြားစေသည်။
သင်ဘယ်လိုချောကလက်ဆွစ် meringue buttercream ကိုသိုလှောင်ထားသလဲ။
ငါမလိုအပ်လျှင် 24 နာရီအကြာတွင်ငါကိုယ်တိုင်ရေခဲသေတ္တာပေမယ့်ချောကလက်ဆွစ် meringue buttercream အခန်းအပူချိန်မှာ 48 နာရီထားရှိနိုင်ပါသည်။ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ၂ ပတ်ထားနိုင်ရင် ၂ လကြာရင်အေးခဲနိုင်တယ်။
၎င်းကိုမွှေးကြိုင်အောင်ပြုလုပ်ရန်မသုံးမီသင်၏ buttercream ကိုအမြဲရောစပ်ပါ။ အေးလျှင်၎င်းကိုအခန်းအပူချိန်သို့ ဦး စွာယူဆောင်လာပါ၊ ထို့နောက်၎င်းကို creamy နှင့်ချောမွေ့သည်အထိရိုက်ပါ။
ဆွစ်ဇာလန် Meringue Buttercream
ချောမွေ့ချောချောမွေ့မွေ့ချောကလက်ဆတ်ဆတ် meringue buttercream သည်သင်၏ပါးစပ်တွင်အလင်း၊ ပြင်ဆင်ချိန် -နှစ်ဆယ် မိနစ် ချက်ပြုတ်ချိန် -၅ မိနစ် အအေး:၁၀ မိနစ် ကယ်လိုရီ၁၁၈kcal
▢၈ အောင်စ (၂၂၇ ဆ) လတ်ဆတ်သောကြက်ဥလူဖြူ
▢၄ အောင်စ (၁၁၃ ဆ) ချောကလက် (သို့မဟုတ်ကိုကိုးမှုန့်) အရည်ပျော်ခြင်းနှင့်90ºမှအအေး
▢နှစ် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း vanilla ထုတ်ယူ
သင့်ရဲ့ချောကလက်ကိုအရည်ကျိုသည့်အထိ ၁၅ စက္ကန့်အတွင်းအပူခံနိုင်သောဖလားတွင်အရည်ပျော်အောင်ထားပါ။ အပူမပေးပါနဲ့ 90ºFမှအအေး
အလယ်အလတ်ပြီနောက်ဟင်းတစ်ခွက်တွင်ရေ ၂ 'ရေကိုယူလာပါကအပူနည်းသွားသည့်အထိအပူကိုလျှော့ချပါ။ သင်၏သတ္တုသို့မဟုတ်ဖန်ရောစပ်ထားသောခွက်ကိုထိပ်တွင်ထားပါ။ ခွက်သည်ရေကိုမထိသင့်ပါ။
ကြက်ဥအဖြူနှင့်သကြားတို့ကိုပန်းကန်ထဲ၌ထည့်ပြီးသကြားဓာတ်ကိုပျော်ဝင်စေပြီးကြက်ဥလူဖြူများကိုချက်ပြုတ်ခြင်းမှရှောင်ကျဉ်ရန်ရံဖန်ရံခါ whisk ။ အရောအနှောသည်110ºFသို့ရောက်သောအခါသို့မဟုတ်သင်၏လက်ချောင်းကြားတွင်သကြားဓာတ်များများမခံစားရတော့သည်နှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ
ပန်းကန်လုံးကိုသင်၏ရပ်တည်သည့်အရောအနှောတွင်ထားပါ၊ အလွန်တင်းကျပ်သောထိပ်များသို့မရောက်မချင်းမြင့်မားသောနေရာ၌ရိုက်ပါ။ သင်ထိမိသည့်အခါအကြံဥာဏ်များသည်မတ်မတ်ရပ်သင့်ပြီး meringue သည်အလွန်ထူထပ်ပြီးသိပ်သည်းမှုခံစားရသည်။
အမြန်နှုန်းကိုအနိမ့်သို့လျှော့ချပါ။ ထို့နောက်သင်၏ဆား၊ အရည်ပျော်။ ချောကလက်နှင့် vanilla ထုတ်ယူမှုတို့ကိုဖြည်းဖြည်းထည့်ပါ။
အမြန်နှုန်းကိုပြန်မြင့်ရန်တိုးမြှင့်ပြီးအရောင်သည်အလင်းနှင့်မပျော့ပြောင်းမှီအထိရိုက်ပါ။ အရသာရှိပါက buttery ကိုမြည်းစမ်းပါက whisking ကိုဆက်ထားပါ။
မြန်နှုန်းကိုနိမ့်ကျအောင်လျှော့ချပြီးချောကလက်နှင့် vanilla တွင်အေးစေပြီးချောမွေ့သည်အထိရောနှောပါ။
အိမ်လုပ် gummy ဝက်ဝံများကိုမည်သို့ထိန်းသိမ်းရမည်နည်း